हेलेना टुर Bad Blood को लेखक संग साक्षात्कार | वर्तमान साहित्य
हेलेना टुर Bad Blood को लेखक संग साक्षात्कार
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | 04/10/2021 12:00 | अद्यावधिक गरियो 30/09/2021 15:46 | साक्षात्कार, लेखकहरू
फोटोहरु: हेलेना टूर को सौजन्य।
A हेलेना टुर यो पनि भनिन्छ जेन केल्डर, छद्म नाम जस अन्तर्गत उनले धेरै शीर्षकहरुमा हस्ताक्षर गरेका छन् रोमान्टिक उपन्यासहरु को अवधि मा सेट १ th औं शताब्दीमा ब्रिटिश शासन, कि शताब्दी को अंग्रेजी साहित्य को लागी उनको प्रेम को कारण। शिक्षक, अब लेख्न बिदामा, पहिलो हस्ताक्षर गर्नुहोस् उनको नाम संग, नराम्रो रगत, गत वर्ष जारी। उहाँ मलाई दयालु हुनुभएको छ यो अन्तर्वार्ता जहाँ उनले हामीलाई उनको र सब थोरैको बारेमा बताउँछन्।
हेलेना टुर - साक्षात्कार
साहित्य वर्तमान: तपाइँको उपन्यास को शीर्षक हो नराम्रो रगत। तपाइँ हामीलाई यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ र विचार कहाँ बाट आयो?
हेलेना टुर:वास्तवमा शीर्षक हो नराम्रो रगत, तर हामी कभर मा अस्पष्टता संग खेल्ने निर्णय गर्यो। यो एउटा ऐतिहासिक फिक्शन थ्रिलर १1858५ in मा लास मेडुलस मा सेट। जबकि सिविल गार्ड क्षेत्र मा तैनात छन् इसाबेल द्वितीय को बिरूद्ध हमलाहरु लाई रोक्न को लागी, जो त्यहाँ छिट्टै पास हुनेछन्, ब्लेड केटीहरु देखा पर्न थाल्छन् एल सिल मा। त्यो एक को आगमन संग मेल खान्छ युवा अनाथ जो एक बहिरा केटी, एक मधुमक्खी फार्म को मालिक को छोरी को हेरचाह गर्नेछ। तर, उनको रक्षा गर्न को लागी उनको उत्सुकता मा, बिस्तारै उनी ब्वाँसो को मुख मा जान्छन्। पहिलो विचार, जसमा अरु सबै कुरा बनाइएको थियो, अपराधको उद्देश्य थियो। तब देखि, र बिभिन्न rewritings मा, पात्रहरु देखा पर्यो र पाठ एक साथ जोडिएको थियो।
HT: एक बच्चा को रूप मा, मेरो हजुरबुबा सधैं मलाई जनावरहरु को बारे मा किताबहरु दिनुभयो। उनीहरु जानकारीमूलक थिए, कथन थिएन। मलाई लाग्छ कि मैले पढेको पहिलो कथा पुस्तक सहित छोटो कथाहरु को एक संकलन थियो खुशी राजकुमारओस्कर वाइल्ड द्वारा, र उहाँ संग म हप्ता को लागी एक आँसु जस्तै रोए।
मैले लेखेको पहिलो कुरा याद थियो १9बर्षको साथ। साथै, एक बाट कथापुस्तिका, तब मैले उनीहरुलाई सारांश दिएँ र मैले उनीहरुलाई प्रमाणित गरें रोमान्स को माध्यम बाट। एक मात्र बच्चा को रूप मा बोरियत संग लड्न को लागी चीजहरु, मलाई लाग्छ।
HT: म सधैं फिर्ता जान्छु नीत्शे, भिसेन्टे Valero, मल्लर्मे, Rilke, काफकाथोमा मानिस, जेन अस्टेन… म खोज को तुलना मा rereading को बारे मा अधिक छु।
HT: मलाई यो थाहा छ: भगवान हेनरी, को डोरियन ग्रेको चित्र। मलाई यो आकर्षक लाग्छ।
HT: Para लेख्नुहोस्, आवश्यक छ थाहा छ कि मसँग समय छ अगाडी। म अनियमित समयमा लेख्न असमर्थ छु, यो तपाइँको पाठ प्रविष्ट गर्न को लागी धेरै गाह्रो छ कि म केहि पनि मलाई हटाउन चाहान्छु।
पढ्न को लागी, कहीं पनि, त्यहाँ शोर छ, मानिसहरु बोल्छन् वा जे भए पनि। म धेरै सजीलै संसार बाट बिच्छेद।
HT: Para लेख्नुहोस्, म को लागी राम्रो गर्छु बिहान (म एक छिटो उठ्ने छु) र, पक्कै, मेरो कार्यालय मा र एक पुरानो कम्प्यूटर संग। म कहीं पनि ल्यापटप लिन को लागी एक होइन। को लागी ली, कुनै नराम्रो क्षण छैन.
HT: मलाई सबै थोक मन पर्छ गुणस्तर, विधाहरु एक लेबल बाहेक अरु केहि होइनन्। तर, उनीहरुको उपयोग गरेर, त्यहाँ दुई चीजहरु छन् कि म उनीहरु संग गर्न सक्दिन: आत्म-सहायता र कामुकता।
HT: अब म पुन: पढ्दै थिएँ रातो र कालो, Stendhal, तर म पढ्न बाधा गैर -अनुरूप हत्यारा, कार्लोस Bardem द्वारा, किनभने म उहाँ र डोमिन्गो Villar बीच एक कुराकानी सञ्चालन गर्न छ।
एकै समयमा, म आरएक atgatha क्रिस्टी प्रकार उपन्यास लेखन, जे होस् शैलियों को एक मिश्रण संग, १ Villa 1897 Villa मा Villa de Ochandiano मा सेट। म अझै पनी यो कसरी शीर्षक हुनेछ थाहा छैन।
लाई: तपाइँ कसरी सोच्नुहुन्छ प्रकाशन दृश्य हो?
HT: प्रकाशकहरु, अपवादहरु संग, कम्पनीहरु हुन् उनीहरु बिक्री चाहन्छन् र उनीहरु को लागी हेर्न बाध्य छन् नाफा र गुणस्तर को बीच सन्तुलन। अब, पैनोरमा मिडिया मानिसहरु जो राम्रो नतिजाहरु संग भरीएको छ, तर, सौभाग्य देखि, त्यहाँ अपरिचितहरु को लागी अवसरहरु छन् (निरन्तरता बिक्री मा निर्भर गर्दछ, पक्कै)।
मैले सधैं लेखेको छु, तर प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेँ केहि बर्ष पहिले किनकि म एक हाई स्कूल शिक्षक हुँ र भाग्न चाहन्थे एक जो हामी माथि आएको छ। यो धेरै गाह्रो छ कि तपाइँ कसरी बुद्धिमान व्यक्तिहरु लाई व्यवहार गर्न को लागी धक्का दिइन्छ जस्तै कि उनीहरु मूर्ख थिए जब सम्म उनीहरु मूर्ख बन्दैनन्। धेरै दुख्छ।
HT: मैले एक को लागी सोध्न को लागी स्थिति को फाइदा उठाएको छु छोड र म लेख्न समय बिताइरहेको छु। म धेरै घरेलु छु र कैदले मलाई धेरै असर गरेको छैन। तर पक्कै मलाई महामारीको बारेमा केहि लेख्न मन लाग्दैन, मलाई लाग्छ कि सामान्यता को कमी को बारे मा पहिले नै एक सामान्य थकान छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » हेलेना टुर Bad Blood को लेखक संग साक्षात्कार
कात्तिक। सम्पादकीय समाचार को चयन